Yaab, Dhacdo & Barnaamij. – Page 2 – Saafi News Somali News & Entertainment Hindi Af Soomaali Musalsal
Yaab, Dhacdo & Barnaamij.	Dowlad Afrikaan ah oo ciqaab culus ku soo rogtay ragga uurka u yeella gabdhaha iskuulada dhigta
June 24, 2017	Yaab, Dhacdo & Barnaamij.
Comments Off on Dowlad Afrikaan ah oo ciqaab culus ku soo rogtay ragga uurka u yeella gabdhaha iskuulada dhigta
42 Views Madaxweynaha dalka Tanzania John Magufuli ayaa sheegay in gabdhaha ciyaal iskuulka ah ee uurka yeesha aan loo ogolaan doonin inay ku soo laabtaa waxbarashada marka ay ilmo dhalaan. Waxaa uu ku sababeeyay go’aankan in markii la damco in xisaab laga shaqeeyo ay gabdhuhu dhihi doonaan macalin aan naaska soo nuujiyo ilmaha taasoo uu sheegay inaan la aqbaki karin John Magufuli ...
Daawo Sawirada: Aabe iska ooyay markii uu dhagaystay garaaca Wadnaha Gabadhiisa oo dhimatay
Comments Off on Daawo Sawirada: Aabe iska ooyay markii uu dhagaystay garaaca Wadnaha Gabadhiisa oo dhimatay
65 Views Waxaa la baahiyay sawirrada markii aabe uu dhagaystay wadnaha gabadhiisa oo dhimatay oo ka dhex garaacmaya xabbadka nin ay badbaadisay, arrintaasi waxay ka dhacday dalka Maraykanka. Bill Conner ayaa baaskiil ka qaatay gurigiisa oo ku yaalla Wisconsin isaga oo boqollaal kiiloo mitir jaray si uu garaaca wadnaha gabadhiisa ugu soo dhagaysto magaalada Baton Rouge ee caasimadda u ah gobolka Louisiana ...
Qisadii Raahibkii khamriga cabay iyo natiijadii ka dhalatay (Daawo Muuqaal)
Comments Off on Qisadii Raahibkii khamriga cabay iyo natiijadii ka dhalatay (Daawo Muuqaal)
37 Views Khamriga xikmado badan ayaa loo xaarantimeeyay. Qofku haduu khamri qabo caqligaa doorsooma kadibna ficil kasta oo xun in uu u sameeyo ayay u badan tahay. Qisdan oo kamid ah qosooinkii uu nabi Maxamed (CSW) ka sheekeeyay waxa aan ku soo qaadan doonaa nin raahib (xerow) ahaa oo umadahii inaga horeeyay ka mid ahaa oo khamri cabay iyo natiijadii ka dhalatay.
Macalimiinta Iskuulada gobol ka tirsan Maraykanka oo la hubeeyey & sababta ka dambeysa
June 23, 2017	Yaab, Dhacdo & Barnaamij.
Comments Off on Macalimiinta Iskuulada gobol ka tirsan Maraykanka oo la hubeeyey & sababta ka dambeysa
46 Views Macallimiinta wax ka dhiga iskuulada gobolka Colorado ee dalka Maraykanka ayaa loo tababarayaa inay hub ku dhex qaataan fasallada dhexdooda si ay ugu difaacaan ardayda. Arrintan ayaa daba socota xasuuqii ka dhacay iskuul halkaasi ku yaala, sannadkii 2012 kaasoo arday badan lagu laayey. Tababarkan oo qaadan doona muddo saddex maalmood ah ayaa ka kooban adeegsiga hubka iyo tababar dhanka caafimaadka ...
Nin xabsi adag ku muteystay sawir laga argagaxay oo uu soo dhigay Bartiisa facebook (Daawo Sawirro)
June 21, 2017	Yaab, Dhacdo & Barnaamij.
Comments Off on Nin xabsi adag ku muteystay sawir laga argagaxay oo uu soo dhigay Bartiisa facebook (Daawo Sawirro)
96 Views Maxkamad ku taalla dalka Aljeeriya ayaa nin ku xukuntay labo sano ka dib markii uu canuggiisa ka soo laadlaadiyay daaqad isagoo ujeedadiisu tahay in facebook dhigo ka dib likes badan loo saaro. Aabahan ayaa dadka la wadaagay sawiro uu ka muuqado isag oo canuggiisa ka laadlaadinaya daaqadda dabaq dheer, isaga oo ku soo qoray “1,000” likes saara ama waan sii ...
Sacuudiga oo musaafuriyay geelkii ugu badnaa oo Qatar laga leeyahay
Comments Off on Sacuudiga oo musaafuriyay geelkii ugu badnaa oo Qatar laga leeyahay
43 Views Dowladda Sacuudiga, ayaa dalkeeda ka musaafurisay ugu yaraan 15 kun oo neefka geela ah, oo ay leeyihiin xoolo dhaqato u dhashay dalka Qatar. Xoolo dhaqatada reer Qatar, ayaa lagu khasbay in ay isaga baxaan Bariga Sacuudiga, oo xoolahoodu ay daaqsiin ahaan ugu jooggeen, sida laga soo xigtay Saraakiisha Dowladda Qatar. Geela laga soo musaafuriyay dalkaasi Sacuudiga, ayaa lagu soo dhaweeyay ...
Page 2 of 207«12345	»	102030...Last »	Design by: Saafi Films Team.